Izinsiza Zomfula Ukudilizwa Nokunakekelwa Komfula - i-Ellicott Dredges
Ukudonswa Komfula Nokunakekelwa
I-Ellicott Dredges idizayina, ikhiqize futhi ihambise ama-dredges amancane naphakathi nendawo alungele izinhlobonhlobo zamaphrojekthi wokwehlisa umfula. Uchungechunge lwethu lwe-Ellicott Dragon® ama-cutterhead suction dredges ayatholakala ngobukhulu obuhlukahlukene nangokujula kokumba, futhi alungele ukwemba izinhlobo nezinhlabathi zomhlabathi ezikhululekile nezihlanganisiwe, njengesihlabathi, i-gravel, i-silt, nobumba. Lawa madamu omfula aphathekayo angasetshenziselwa izinhlelo ezahlukahlukene zokunciphisa imifula ezincane, ezinkulu, kufaka phakathi ukunciphisa izikhukhula nokunakekelwa kwesiteshi.
Xhumana Nathi Ukuze uthole Isilinganiso Esenziwe Ngokwezifiso
Abantu abahlala emadolobheni amakhulu emhlabeni wonke bathembele emifuleni njengemithombo yokudla, amanzi ahlanzekile, kanye nezinto zokuhamba. Ngokuhamba kwesikhathi, udaka, inzika, namanye amadiphozi ayanqwabelana, ngokuvamile kuvimbela noma kuguqule ukugeleza kwemvelo komfula, namandla. Amaphrojekthi wokwehliswa komfula enzelwe ukunqanda ukuguguleka komhlabathi, ukujulisa iziteshi zokuhamba, nokuhlinzeka ngokunciphisa izikhukhula.
Ukuvimbela Ukuguguleka Komhlabathi
Lapho isiteshi somfula siphazamiseka, osebeni lomfula kwezinye izingxenye zomfula luqala ukuguguleka kancane njengesiqu esisuka endaweni yokuqala othintana nayo kancane kancane sigeleza sisuke kuleso siza siye kwesinye sezansi komfula. Ngenxa yalokhu, ijubane lomfula liyakhuphuka, okwenza ukuthi ukhukhula olunamandla lomfula nolwasemfuleni kwenzeke, buthaka ezinye izingxenye zomsele womfula. Ngokuhamba kwesikhathi, amadiphozithi amadiphozi anyusa izimo eziya ziba zimbi zohlelo lomfula.
Ama-dredges asetshenziselwa ukususa indle ngokweqile emfuleni. Ukuqeda le nzika kuvuselela ububanzi besiteshi nokujula, kuzinzise udonga oluzungezile, futhi kunciphise ukuguguleka kolwandle okuzayo.
Ukugcina Ukujula Komzila Womfula
Iziteshi zomfula ziqoqa imfucumfucu engokwemvelo neyakhiwe ngesikhathi, edinga ukulungiswa njalo kokugcinwa ukuze kulondolozwe ukujula kwesiteshi esifanele. Njengoba ukudilika kukhuphuka ezansi komfula, kunciphisa ukujula komfula.
Ama-dredges ajwayele ukusetshenziselwa ukuqeda isihlabathi esiningi, udaka, kanye nentlenga esiteshini somfula esivumela izikebhe neminye imikhumbi ukuba ihambise umfula ngokuphepha.
Imifula enganakekelwa iqoqa udoti omningi, isihlabathi nodaka, okungadala ukuthi umfula ugingqike. Ukufakwa ngamabhodlela kunciphisa ikhono lomfula lokugeleza ngokwemvelo futhi kubangele ukuthi amazinga wamanzi akhuphuke kwezinye izingxenye zomfula futhi adlule osebeni lomfula. Lapho amanzi amaningi ngokweqile engena eshedini eligcwaliswe ngamanzi ngesivinini esisheshayo, kwenzeka izikhukhula.
Ukudonswa komfula akuvimbeli izikhukhula, kepha kunciphisa ezinye zezingozi ezihambisana nakho. Ukwehliswa komhlaba kubalulekile ekulondolozeni ukugeleza kwemvelo komfula futhi kunciphisa amandla enhlekelele engenzeka ukuthi angenzeki emadolobheni athanda ukuba nezikhukhula eziphindaphindayo ngezikhathi zemvula.
In I-Buenos Aires, i-Argentina dredges yasetshenziselwa ukumba umgudu womfula ojulile futhi ususe indle eyeqile eSalado River Basin ezindaweni eziphansi lapho kutholakala khona izikhukhula. Ezinye izingxenye zomfula bekunzima ukufinyelela kuzo, kepha abasebenzi bakwazile ukuqaqa futhi bahlanganisa kabusha ama-dredges avumela amaqembu ukuthi aqhubeke nokumba phansi kanzima ukufinyelela ezindaweni ezingasemfuleni. Isihlabathi esisuswe ngesikhathi sephrojekthi sasetshenziselwa ukuthuthukisa izindawo eziphansi kanye nokwenza ngcono ukuphakama osebeni lwemifula ukunqanda izikhukhula ezizayo.